ဥရောပရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံလမ်းညွှန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံလမ်းညွှန်
ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာယုံကြည်ကြသည် ရထားလမ်းခရီးသွား အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ခရီးသွားရန်ဂေဟဗေဒနည်းလမ်းများ. ကြောင်းအဆုံး, ကျနော်တို့နီးပါးနှစ်ဒါဇင်နှင့်အတူညှိနှိုင်းပါပြီ ကွဲပြားခြားနားသောရထားအော်ပရေတာ ဥရောပတစ်လွှားမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေကိုယူဆောင်လာဖို့ပါ. ဆိုလိုတာကငါတို့ရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံမှာမင်းကိုရာနဲ့ချီတဲ့နည်းလမ်းတွေပေးနိုင်တယ်.
မြန်နှုန်းမြင့် Eurostar မှ အလွအိပ်ပျော်နေသောရထား လမ်းကြောင်းများ, ငါတို့သည်သင်တို့ရန်မလိုပါဒါအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများရှာဖွေတာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်း. ကြောင်းအဆုံး, ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းအချို့ကိုဖော်ပြသည့်မီးရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံများလမ်းညွှန်ဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသည်. ဤရွေ့ကားလန်ဒန်ကနေပဲရစ်ခရီးစဉ်ပါဝင်သည်, ရောမမြို့မှ Florence, နှင့်နေရာတိုင်းကြား၌.
သင်ဒီမှာသင်၏ဘူတာရုံမမြင်ရလျှင် – မစိုးရိမ်ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကွဲပြားခြားနားသောရထားလိုင်းများတစ်အကွာအဝေးပေါ်လက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေခွင့်ပြု – ဒေသခံလမ်းကြောင်းများ, နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်မှုများ, နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ခရီးသွားအတွက်အကောင်းဆုံးအားလုံးပါဝင်သည်.
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အချို့ခရီးစဉ်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေ, နှင့်သင်အဆင်သင့်ပါပဲသည့်အခါ, ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာသို့သွားပါ!
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား တစ်ဦးကရထား Save, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိဝဘ်ဆိုက်.
1. London မှ Pancras အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ Paris သို့ရထားများ
လန်ဒန်ကနေပဲရစ်ကိုပြေးတဲ့ရထားဟာဥရောပရဲ့အမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်. Eurostar ကလည်ပတ်သည်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှပြင်သစ်သို့ ၂ နာရီနှင့် ၁၆ မိနစ်အတွင်းသင်ကိုယ်တိုင်ရနိုင်သည်. ၎င်းသည်သင့်ကိုအိပ်ရန်အချိန်လုံလောက်စေသည်, ရထားယူ, နှင့်ပျော်မွေ့ ပြင်သစ်မြို့တော်သို့တစ်ရက်ခရီး. တစ် ဦး baguette ဖမ်းပြီးနှင့် Louvre လှည့်လည် – သို့မဟုတ်ပဲရစ်ကမ်းလှမ်းသည့်အလှအပအားလုံးကိုခံစားပါ.
London St Pancras မှထွက်ခွာသွားသည်, ရထားတွေနာရီတိုင်းနီးပါးပြေးနေတယ်. ပဲရစ်မှလန်ဒန်သို့ပြန်လာခြင်းသည်လည်းထပ်တူပင်ဖြစ်သည်, နှင့်သင် onboard သင်က high-end ရထားလမ်းကြောင်းမျှော်လင့်ထားသည့်ထိပ်တန်းသာယာအဆင်ပြေမှုများတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျပဲရစ်တည်းခိုနေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်လည်းဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်သွားနိုင်ပါတယ်, အကယ်၍ ဆန္ဒရှိပါကနံနက်စောစောတွင်သင်လန်ဒန်သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်. သင် SoHo သို့သွားပြီး Broadway ပြပွဲသို့သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်အချို့ကိုရနိုင်သည်. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, မီးရထားသည်ထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်တွင်အပြီးသတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်.
2. Florence မှရောမ Termini အထိရထားများ
အီတလီနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများနှစ်ခု, ဖလောရင့်စ်နှင့်ရောမတို့သည်ရာနှင့်ချီသောနေရာများဖြစ်သည် ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု visit ည့်သည်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမျိုးသည်. အနုပညာရိုက်ကူးခြင်းများမှာကြည့်ရှုရန်ဗာတီကန်လှည့်လည်နိုင်ပါတယ် Sistine Chapel. အစားအစာများသည်လတ်ဆတ်သောကျွဲ mozzarella ကိုခံစားနိုင်သည်. မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့အရသာ, ဒီနှစ်ခု အီတလီမြို့ကြီးများ များမှာ အလွသောနေရာများ တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ငါးဖြုန်းဖို့.
ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, ဖလောရင့်စ်နှင့်ရောမတို့ကိုဆက်သွယ်သောရထားများသည်ပေါများ။ စျေးလည်းသက်သာသည်. ခရီးဟာနာရီဝက်လောက်သာကြာပြီးသင့်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာအလွန်သာယာတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအတွက်ထပ်ဆောင်းအပိုဆုကြေးရရှိသည်.
3. လမ်းကြောင်းမြေပုံ: ရောမမြို့မှမီလန်သို့ရထားများ
ရောမအကြောင်းပြောပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်မီလန်အီတလီအတွက်အခြားအံ့သြဖွယ်မြို့တမြို့. ပန်းသီးသည်လိမ္မော်သီးနှင့်အီတလီတောင်ပိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်, မီလန်သည်ခေတ်မီကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဖက်ရှင်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအဖြစ်အပျက်များကြောင့်လူသိများသည်, အီတလီသည်မည်သည့်အီတလီအားလပ်ရက်တွင်မဆိုရပ်နားရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ရာသီဥတုက မြေထဲပင်လယ်နဲ့ သိပ်မတူပေမယ့်, သင်နေဆဲခံစားနိုင်ပါတယ် လှပသောဗိသုကာ ယခုနှစ်မည်သည့်အချိန်တွင်ပင်ပြတိုက်သို့မဟုတ်နှစ်ခု.
ရောမမြို့မှမီလန်သို့ခရီးသည်ဖလောရင့်စ်၏ခရီးထက်ပိုရှည်သည်. ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါ, သို့သော်, သုံးနာရီခွဲကြာအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဆဲပါ. အဲဒါကမင်းကိုအချိန်ပိုပေးတယ် ရှုခင်းကိုခံစား!
Bologna မှ Milan လက်မှတ်များ
မည်သည့်ဥရောပအားလပ်ရက်အတွက်မဆိုလိုအပ်သည်, ဟမ်းဘတ်, နှင့် ကိုပင်ဟေဂင်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် သင့်စိတ်ထဲတွင် ပေါက်ဖွားလာမည့် ပထမဆုံးမြို့များ မဟုတ်ပေ။. ဒါရှက်စရာပါပဲ, သော်လည်း, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့ကြီးနှစ်ခုစလုံးဟာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ရောင်စုံတူးမြောင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်. ဟမ်းဘတ်သည်ဂျာမနီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးဖြစ်သည်. ၎င်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်သင်ယခင်ကကြားဖူးခဲ့ဖူးသည် ထူးခြားသောလူကြိုက်များသောအစားအစာ ဟမ်ဘာဂါ. ပျော်စရာတကယ်တော့ – Hamburg မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း Hamburgers လို့ခေါ်တယ်.
ကိုပင်ဟေဂင်, သို့သော်ငြားလည်း, ဒိန်းမတ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်. သင်အတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ် နွေရာသီသို့မဟုတ်အေးမြသောရာသီဥတုအန္တရာယ်, ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့မှာလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်. တောက်ပသောအဆောက်အအုံများမှသည်တင်ပါးဆုံရိုးအရက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်များအထိ, ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကအရာအားလုံးလောက်ပဲရှိတယ်.
မြို့နှစ်မြို့အကြားရထားကခဏကြာပါလိမ့်မယ်. ခရီးများသည် ၆ နာရီအထက်သို့တက်သည်, ဒါကြောင့်ဖျော်ဖြေရေးရောက်စေဖို့သေချာပါစေ. ဒါကဆိုပါတယ်ခံရ, ရထားတွေကခေတ်မီတယ်။ ထွက်ခွာသွားတာအတော်များများရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းထိုင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရတယ်.
5. လမ်းကြောင်းမြေပုံ: Zurich မှ Ber သို့ရထားများ
သငျသညျအစဉျအမွဲအဲလ်ပ်တောင်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျ Zurich နှင့် Bern ထက်စူးစမ်းဖို့မပိုကောင်းအခြေစိုက်စခန်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. နှစ် ဦး စလုံးအတွက်တည်ရှိသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ, ဤမြို့များသည်တစ်နာရီသာကွာဝေးသည် မီးရထားကနေတဆင့်. သငျသညျကသဘောပေါက်ကြမည်မဟုတ်ပါသော်လည်း, Bern သည်ဆွစ်ဇာလန်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်, ဂျီနီဗာသို့မဟုတ်ဇူးရစ်ကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့မျှမရှိပါ. လူ ဦး ရေတစ်သန်းကျော်ရှိသောမြို့သည်လှပသောအလှအပနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်.
ဤအတောအတွင်း, ဇူးရစ်သည်၎င်း၏ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်ကျော်ကြားသည် – သင်ကိုယ်တိုင်ယင်း၏ကမ်းခြေတည်နေရာထက်၎င်း၏အဆောက်အ ဦး များအားဖြင့်စွဲလမ်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်သော်လည်း. မြို့တော်သည်အမြဲတမ်းအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသည် 2,000 နှစ်ပေါင်းငါးရာနီးပါးလူ ဦး ပါဝင်သည်.
ရထားထွက်ခွာသွားခြင်းသည်မကြာခဏနှင့်ခေတ်မီရထားများဖြင့်လည်ပတ်စေသည်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောတိုတောင်းတဲ့ခရီးနှင့်အတူဤအပေါ်စဉ်းစားရန်အချိန်အများကြီးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း. အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်သို့ချိတ်ဆက်ပါ, အနည်းငယ် browse, ပြီးတော့သင်ပြီးပြီ – ခရီးသွားနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း!
Zurich To Bern လက်မှတ်တွေ
ဂျီနီဗာသို့ Bern လက်မှတ်တွေ
ဘားမှ Interlaken ရန်
ဥရောပအနှံ့အပြားတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းကြောင်းရှာရန်သင်ရှိနေသည်. သငျသညျဒေသခံရွေးချယ်စရာရှာဖွေနေသို့မဟုတ်တစ်သက်တာတစ် transcontinental ခရီးစဉ်စီစဉ်ခြင်းရှိမရှိ, နှင့်ကပ်ပါ တစ်ဦးကရထား Save ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးလက်မှတ်ရွေးစရာများကိုရှာဖွေရန်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဥရောပရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံလမ်းညွှန်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-route-maps-guide%2F%3Flang%3Dmy ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, ပြီးတော့သင်ရွေးချယ်လိုသော nl နှင့် fr သို့ trl နှင့်အခြား nl သို့အစားထိုးနိုင်သည်.
ဥရောပခရီးသွား eurotrip longtrainjourneys ရထားလမ်း ရထားခရီးသွား ခရီးသွား ကံ
Carissa ဟာခရီးသွားနှင့်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့စာဖတ်သူတွေကိုအကောင်းဆုံးခရီးသွားလမ်းညွှန်တွေပေးပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်. သူမသည်ကျော်ခေါက်ပါတယ် 40 သူမ၏ bucketlist ပယ်နိုင်ငံများနှင့်ရပ်တန့်ရန်မရည်ရွယ်ရှိပါတယ်. Napoli တွင်ကော်ဖီသောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် Edinburgh တွင်ဟယ်ရီပေါ်တာအားဂုဏ်ပြုခြင်း, သူမသည်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်အသစ်သောအရာများကိုတွေ့မြင်ရန်အမြဲတမ်း ၀ မ်းသာသည်. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ